XOG: Maxay tahay Caqabadaha ku xeeran Shahaadada Ardayda Puntland, Maxaase jabiyey Heshiiskii u dambeeyey?
GAROOWE(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu saacadihii u dambeeyey dabagal ku sameeyey warar soo baxaya oo sheegaya in mar kale ay hakad gashay arrinta Shahaadada Ardayda Puntland oo horey maalmo kahor loogu heshiiyey in la bixiyo oo ay bixiso wasaaradda waxbarashada ee Puntland, iyadoo ay ogolaanshahan wada gaareen Xildhibaano ka soo jeeda Puntland iyo Wasiirka Waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre.
Warsiduhu wuxuu ogaaday macluumaad fara badan oo ku wajahan arrimahan, wuxuuna xariiro wali la sameynayaa dhinacyada Puntland iyo Federaalka, si jawaab loogu helo qodobada qaarkood oo ay ku jiraan arrimo xasaasi ah.
Xogta aan ogaanay ayaa daaha ka rogaysa in wasaaraddaha labada dhinac ee Waxbarashadu ay isku hayaan dano dhaqaale iyo mashaariic la xariirta, ayna ugu hoos-gabanayaan Shahaadada Ardayda Puntland, taas oo aan ku ogaanay baaritaanada.
Sidaas oo kale, waxaan helnay xog sheegaysa in uu jiro Khilaaf gaar waqtigan uga dhaxeeya qaar kamid ah madaxda Wasaaradda Waxbarashada ee Heer Federaal iyo Puntland, oo ay isku hayaan mashaariicda socda oo ay donayso Federaalku in ay maamulkeeda yeeshaan.
Qodobada kale ee aan ogaanay waxaa kamid ah in maalintii u dambeysay Is afgaradkii la gaaray uu keenay hadalo ay is dhaafsadeen labada dhinac uu burburo, gaar ahaana xagga telfoonka wada hadalo aan fiicney oo isku maqleen Madaxda labadan wasaaradood qaar kamid ah.
Mudane katirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda Puntland, kana mid ahaa xubnihii dhawaan la kulmay Wasiirka Waxbarashada Goodax Barre, ayaa sheegay in ay arrimaha socdaa yihiin kuwa siyaasadeysan, balse aysan iyagu arrimahaas galin ee ay ka hadleen oo kaliya arrinta bixinta Shahaadada.
“Waxaan ku sheegi karaa in labada dhinacba ay ku jiraan dad wax qaloocinaya oo meel daran ka eegaya, haba ka eegaane waxaan u sheegnay in siyaasadda iyo waxbarashada la kala saaro, Mustaqbalka caruurtana aan lagu ciyaarine’e ee lafasaxo shahaahada, taas waa naga yeeleen markii u dambeysay, laakiin arrintan aad hada shegaysaa waa war cusub oo kale oo is muuqashadooda ku wajahan” Ayuu yiri Xildhibaankan baarlamaan.
Labada dhinac ee Puntland iyo Federaalka wey kagaabsadeen in ay arrimahan ka jawaabaan, balse xogo badan oo aan helnay waxay sheegayaan in hadda ugu dambeyn ay Ardaydu shahaadada heli doonaan, balse ay jiri doonaan arrimo badan oo aysan isku raacsaneyn dhinacyadu.
Waxbarashadii dadii la siyaasadeeyey, ha dowlada kale waxbarashadiina manhajka ah ku xirta, isga taga iyaga oo dhan, maxaa keenay waxaan.